Wafdi kasocda Kenya oo goor dhaw ka duulaya Nairobi, kuna wajahan Kismaayo.
NAIROBI(P-TIMES) – Sidda ay tabinayso warbaahinta gudaha ee dalka Kenya & warar laga helay dhinaca Madaxtooyada Jubbalandba waxay u xaqiijiyeen Warsidaha Puntlandtimes in maanta wafdi kasocda dawladda Kenya oo gaaraya 50 xubnood ay tagi doonaan magaalada Kismaayo.
Wafdigan, waxaa ku jiri doona inta badan mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya ee laga soo doorto gobalka Waqooyi Barri ee xaduuda la leh Soomaaliya, waxayna ku tagayaan Kismaayo duulimaad rasmi ah oo diyaaradeed.
Wafdiga, waxaa xubno ka ah Taliyayaasha ciidamada Kenya, xubno ka socda wasaaraddaha dawladda iyo Saraakiil kala duwan.
Diyaaradda xubnahan geyn doonta magaalada Kismaayo ayaa ah tii horey uga soo duushay Nairobi ee tagtay Garoowe iyo Kismaayo, meelahaasna kasoo qaaday wafuud kala gedisan oo u tagay caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Gudoomiyaha aqbaliyada baarlamaanka dalka Kenya Aden Barre Ducaale ayaa hogaamin doona wafdigan kasocda dalka Kenya, sidda ay sheegayan wararka laga helayo magaalada Nairobi, waxayna ilaa Axadda joogayaan magaalada KIsmaayo.
Xukuumada Soomaaliya, waxay aad uga carootay wafdigan tagaya Kismaayo, iyadoo ay wararku sheegayaan in arrimaha taagan ay walaac ka qabto, waxaana qoraal rasmi ah oo cabasho ay u gudbisay Xukuumadda Muqdisho safiirka Kenya u jooga Soomaaliya oo shalay looga yeeray wasaaradda Arrimaha dibada.
Dawladda ayaa amartay in duulimaadyada ka imaanaya Nairobi oo dhan ay soo maraan magaalada Muqdisho, sidaas oo kalena dib u sheegtay in aan cidna xayiraadii ka qaadin magaalada Kismaayo ee Jubbaland.
Xildhibaanada laga soo doorto Wajeer, Gaarisa & Mandheera oo ah magaalooyinka ugu waa weyn gobalka Waqooyi Barri Kenya ayaa tagaya magaalada Kismaayo, waxayna sidaas oo kale matali doonaan dawladooda Kenya.
Aaden Barre Ducaale ayaa u sheegay warbaahinta in subaxnimada Sabtida ay wafdigoodu ka dagayaan magaalada Kismaayo ee Soomaaliya, wuxuuna sheegay in aysan jirin cid hor istaagi karta safarkoodan oo uu sheegay in ay ku tagayaan qeyb kamid ah dhulkooda oo ula jeeday dhinaca gobalka Waqooyi Barri ee Kenya.